Buugaagta Kacaanka Faransiiska
Cinwaanka Kacaanka Faransiiska #1
Cinwaanka Kacaanka Faransiiska #2
Cinwaanka Kacaanka Faransiiska #3
Cinwaanka Kacaanka Faransiiska #4
Cinwaanka Kacaanka Faransiiska #5
Cinwaanka Kacaanka Faransiiska #6
Erey-bixinnada Kacaankii Faransiiska
Dukumiintiyada kacaanka Faransiiska
Su'aalaha Qoraalka Kacaanka ee Faransiiska
Qaamuusiyadii kacaanka Faransiiska ee AK
Qaamuusiga Kacaankii Faransiiska ee LZ
Sawirro naqshadeynta Faransiiska
Taariikhyahannada Kacaanka Faransiiska
Khariidadaha kacaanka Faransiiska
Kediska xusuusta ee kacaanka Faransiiska - dhacdooyinka 1789-91
Kediska xusuusta ee kacaanka Faransiiska - dhacdooyinka 1792-95
Kediska xusuusta ee kacaanka Faransiiska - dhacdooyinka ilaa 1788
Kediska xusuusta ee kacaanka Faransiiska - kooxo
Kediska xusuusta ee kacaanka Faransiiska - fikradaha
Kediska xusuusta ee kacaanka Faransiiska - hogaamiyaasha
Kediska xusuusta ee kacaanka Faransiiska - shuruudaha (I)
Kediska xusuusta ee kacaanka Faransiiska - shuruudaha (II)
Kediska xusuusta ee kacaanka Faransiiska - shuruudaha (III)
Xusuusta xusuusta kacaanka Faransiiska
Ku dhawaaqidda Kacaankii Faransiiska
Kediska kacaanka Faransiiska #1
Kediska kacaanka Faransiiska #2
Kediska kacaanka Faransiiska #3
Kediska kacaanka Faransiiska #4
Kediska kacaanka Faransiiska #5
Kediska kacaanka Faransiiska #6
Qiimaynta Kacaanka Faransiiska ee bilowga ah
Qufulka kacaankii Faransiiska
Mawduucyada Kacaanka Faransiiska
Kacaankii Faransiiska yaa ahaa
Wordsearch-ka Faransiiska Revolution - fikradaha
Erey-bixintii Kacaanka Faransiiska - dhacdooyinka
Erey-bixintii Kacaanka Faransiiska - dadka
Erey-bixinta Kacaankii Faransiiska - goobo
Erayadii Kacaankii Faransiiska
French Revolution The lahaa ku dhawaad ​​wax kasta oo aan ku xirno kacdoonno - royals rayals, aristocrats himilo, canshuur badan, goosashada guuldarro, cunto yaraanta, reer magaalka xanaaqsan, jinsi, been, musuqmaasuq, rabshado dadweyne, xagjirnimo iyo murtiyo, xanta iyo shirqool, argagixiso-go'doomiyay gobolka. iyo mashiinada madaxa lagu gooyo.
In kasta oo aan ahayn kacaankii ugu horreeyay ee casriga casriga ah, Kacaankii Faransiiska ayaa noqday tallaabada looga soo horjeedo kacdoonnada kale. Qalalaasaha siyaasadeed iyo bulsheed ee qarnigii 18aad ee Faransiiska ayaa waxaa bartay malaayiin dad ah - laga soo bilaabo aqoonyahanno u sarreeya illaa ardayda dhigata dugsiga sare. The duufaanta Bastille on July 14th 1789 waxay noqotay mid ka mid ah waqtiyada qeexaya taariikhda reer Galbeedka, oo ah mowduuc kaamil ah oo dadku ku kacaan. Ragga iyo dumarka kacaanka Faransiiska - Louis XVI, Marie Antoinette, Marquis de Lafayette, Honore Mirabeau, Georges Danton, Jean-Paul Marat, Maximilien Robespierre iyo kuwa kale - waa la bartay, lafa-guray oo la tarjumay. Taariikhyahanada in kabadan labo qarni ayeey ku qiimeynayeen kacaankii faransiiska, iskudayga go’aansiga inuu yahay hormar dhanka horumarka ama hoos udhaca nacaybka.
Jaleecada hore, sababaha Kacaankii Faransiiska waxay umuuqdeen kuwo toos ah. Dabayaaqadii qarnigii 18aad, dadka reer France waxay soo noolaayeen qarniyo sinnaan la’aan ah iyo dhiig-miirasho. Maamulka bulshada ee hadda jira ayaa u baahan Hanti Saddexaad, Muwaadiniinta qaranka, inay shaqadooda gudan karaan iyagoo waliba ku waajibaya culayska cashuuraha. Boqorka wuxuu ku noolaa meel gooni ah oo gaar ah oo ku taal Versailles, isaga boqortooyada kuwa ku xeel dheer aragtida laakiin dhab ahaan wax kama jiraan. Khasnadda qaranku waxay ahayd ku dhawaad ​​mid madhan, oo ay ku kaceen maamul xumo, liidasho, musuqmaasuq, kharash garayn iyo ka qeyb qaadashada dagaalada shisheeye.
Dabayaaqadii 1780s, wasiirradii boqorka waxay si ba 'aad ah u doonayeen inay fuliyaan dib-u-habeyn maaliyadeed. Wixii ka dhashay muran ka dhashay dib-u-habeeynta canshuuraha ee la soo bandhigay ayaa ugu dhakhsaha badan u dhaqaaqdey dhaqdhaqaaq loogu talagalay is-beddel siyaasadeed iyo dastuur. Isku dhac A Estates-General bartamihii-1789 wuxuu horseed u ahaa samaynta Gole Qaran, oo ah kii ugu horreeyay ee dawlado kacaan dhowr ah. Dhacdooyinkaasi, iyada oo aan hanjabaad ama dhiig la daadin lahayn, waxay soo jeediyeen in kala guur nabad ah oo xukunka lagu suurta galo ay suurtogal ahayd. Usbuucyada soo socda, mawjado rabshado caan ah - ee Paris, baadiyaha iyo ee Versailles lafteeda - waxaa ka dhawaajiyay kacaan dhiig badan oo soo socda.
Websaydhka 'Revolutionary' ee Shabakada Kacaanka Faransiiska ayaa ah xog dhameystiran oo buugga-tayo tayo leh oo loogu talagalay barashada dhacdooyinka ka dhaca Faransiiska dhammaadkii 1700s. Waxay ka kooban tahay inka badan 500 ilo kala duwan oo asaasi ah iyo mid sareba, oo ay kujirto faahfaahin soo koobid mowduuc, documents iyo matalaya jaantus. Websaydhkeenna sidoo kale waxaa ku jira waxyaabo tixraac ah sida Khariidadaha iyo khariidadaha fikradda, waqtiyada, Qaamuusyada ereyada, a waa kuma iyo macluumaadka ku saabsan taariikh nololeed iyo taariikhyahanada. Ardaydu sidoo kale waxay ku tijaabin karaan aqoontooda oo ay dib ugu soo celin karaan howlo badan oo khadka tooska ah, oo ay ka mid yihiin su'aalaha, cinwaannada ereyga iyo Erey-bixin.
Marka laga reebo ilaha aasaasiga ah, dhammaan waxyaabaha ku jira Taariikhda Alpha Taariikhda waxaa qorey macallimiin aqoon u leh, qoraayaasha iyo taariikhyahannada. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan websaydhkan iyo ku-xigeennadiisa ayaa noqon kara halkan ka hel.
Marka laga reebo ilaha aasaasiga ah, dhammaan waxyaabaha ku jira websaydhkan waa “Taariikhda Alpha 2018-19. Waxyaalahaan lama koobi karo, lama daabicin karo ama dib looma qeybin karo iyadoon la helin ogolaanshaha muuqda ee Taariikhda Alfa. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan isticmaalka bogga Alfa Taariikhda iyo waxyaabaha ku jira, fadlan tixraac kuwayaga Shuruudaha Isticmaalka.
Goobtan Kacaanyahan ee Faransiiska ayaa ka kooban maqaallo, ilo iyo aragtiyo ka hadlaya dhacdooyinka ka dhacay Faransiiska intii u dhaxeysay 1781 iyo 1795. Bartaan waxaa abuuray oo dayactiray Taariikhda Alfa. Waxay ka kooban tahay ereyada 228,547 ee bogagga 353 waxaana la cusbooneysiiyay bishii Luulyo 31st 2019. Macluumaad dheeri ah, booqo boggayaga wax isweydaarsiga ama shuruudaha adeegsiga.